China BA steel stainless coil ukwenziwa kunye mveliso | IHuaxiao
Umgangatho we-BA kukugqitywa okukhethekileyo, njengokugqitywa kwesipili kodwa kungakhanyi ngokwaneleyo kwisipili. Ukufakwa okuqaqambileyo kukwabizwa ngokuba kukufakwa okuqaqambileyo, kukongeza iimveliso kwindawo evalelweyo ukupholisa kancinci ubuncinci iidigri ezingama-500, emva koko wenze iimveliso ukupholisa kwendalo kusesithuba esivaliweyo, emva koko ukufumana ukukhanya kunye nomphezulu omhle, kwaye ngaphandle kokubangela imeko ye-decarburization.
Umthamo weSino weSinyithi nge-coil yentsimbi engenasici, i-coil eqaqambileyo yentsimbi
Injongo kunye nokuxhamla kokulungiswa kwekhoyili yentsimbi ye-BA
1.Ukuphelisa umsebenzi onzima, ukufumana ulwakhiwo olwanelisayo lwe-metallographic. Xa ukusetyenziswa kweemfuno zokusebenza ezahlukeneyo, ubume obuncinci bokuqaqanjelwa okuqhotyoshelwe emva kokuba isicelo sahlukile, inkqubo yokuqaqamba kobushushu nayo yahlukile.
2.Ukufikelela kwi-non-oxide eqaqambileyo, ukumelana nokulunga komhlaba. Kuba ukubamba okuqaqambileyo kufudumeza umphezulu wemveliso phantsi komoya okhuselayo womxube we-hydrogen kunye ne-nitrogen, indawo engenayo i-oxidized kunye neqaqambileyo ifunyanwa ngokulawula ngokungqongqo imeko esesithandweni, ngakumbi, ubunyulu, intsalela yeoksijini kunye nendawo yombethe. Xa kuthelekiswa nomphezulu ofunyenwe nge-annealing yesiqhelo kunye nokukha i-pickling, umphezulu osusiweyo we-chromium we-strip uyancitshiswa ngenxa yokungabikho kwenkqubo ye-oxidation, kwaye ukumelana nomhlwa kulunge ngakumbi kunaleyo ye-2B ipleyiti emva kokucoca.
3.Ukulungiswa okuqaqambileyo Gcina ukugqitywa komphezulu oziqhubayo, akusenakwenziwa ukuba kufumaneke umphezulu oqaqambileyo. Ngenxa yokuhonjiswa okuqaqambileyo, i-coil okanye iphepha eligcina ubumenyemenye bendalo kwaye lifunyenwe ngombala ocwebezelayo kufutshane nomphezulu wesipili, inokusetyenziswa ngokuthe ngqo ngaphandle komnye umatshini, kwiimfuno ngokubanzi.
4.Unokwenza iphetshana lokuqengqeleka elikhethekileyo lomhlaba okanye iikhoyili. Njengenkqubo yokubamba, akukho tshintsho kumphezulu wentsimbi, umphezulu unokugcinwa ngokupheleleyo kwipateni, unokuyila ngokulula umtya okhethekileyo obandayo okanye ikhoyili.
5.Akukho kungcoliseka kwendalo okubangelwa yindlela yesiqhelo yokukhetha. Emva kokubopha umtya awufuni kukhiwa okanye unyango olufanayo, musa ukusebenzisa izinto ezahlukeneyo zeekhemikhali ezinje ngeasidi, akukho ngxaki zongcoliseko ezibangelwa kukuchola.
6.Ukufezekisa ulawulo lwentsimbi ethe nkqo kwikhoyili. Kuba uyilo lwesithando somlilo esiqaqambileyo luvumela uhlengahlengiso lwecandelo elingaphantsi kububanzi bomtya okanye wekhoyili, ulawulo lwe-on-line lweshiti lunokufezekiswa ngokulungelelanisa inqanaba lokupholisa kwicala lobubanzi bomtya ngokuhamba komoya
Egqithileyo NO.4 coil yesinyithi
Okulandelayo: Precision coil insimbi